10 Adkaa xigto badan Hagaajinta karaa Naftaada - Rule News
10 Adkaa xigto badan Hagaajinta karaa Naftaada
Waxaa laga yaabaa inay qaadato yar kafeega ah ama wareeg badan tahay dhowr ah oo biir ah ama mashquulo wax kale oo aad ka heli karto gacmahaaga on marka ay timaado nasto maalin adag ee shaqada ka dib,. Well, haa waxaan ahay eed ku saabsan mid ka mid ah in sidoo kale, haddii aan qabto dhintay xiran nal daaha leh a madaxayga ka badan ka dib markii dhowr wareeg oo vodka bar-qaawan! Okay, tusaale xun iyo raaligelinayaa qof kasta this reading kadib qarow igu saabsan ee gobolka in hurudda sakhraansan.
Just ma weydiin sida ay u dhacday, fadlan.
Laakiin waxa runtii xiiso leh waa in sida dadka iyada oo qayb ka mid ah caadiga ah ee nolosha marka la stress xididka-bobbing wajahay? Waxaan ula jeedaa, wax da'da cusub sida Zen ama yoga waa mid ka mid ah waxyaabaha wanaagsan iyo waxa ay dhab ahaantii ka shaqeeya. Ma jiraa qol dhinaca garaadka dadka kuwaas oo run ahaantii aan ursan kara Ubax-in-a-kartaan halka on dhaqaaqo? Waxaa nooca lahaa iga fekerayo in ay jiraan runtii waa wax in this 'maan-badan-arrinta’ wax.
Kaftanka runtii waa daawada ugu fiican waxaa jira mar kasta oo aad tahay. Waxaan ula jeedaa qof kasta ku bixin kartaa lacag fiican si ay u dhagaystaan ​​ahaa majaajiliiste iyo kaliya in la sameeyo aad qoyso surwaal aad ka dib markii uu si adag qosol. Inkasta oo ah waxa ka dhacayay, iyo kuwa soo martay in kastoo mashaqadan ka, waxaa dhaanta inay kaliya qosli halka jeeda dhibaatooyin ah maan cad ka xanaaqiisa aragti baynamutaan. Mid ka mid ah dadka caanka ah aan ugu jeclahay ee waqtiga oo dhan waxaa laga yaabaa in ay Woody Allen. Haddaba kanu waa mid nin kuwaas oo ku siinayaa silloon ee-aad ka-fool ah in uu ka soo jiidayo la ragaxdaa, xitaa iyada oo aan xitaa isku dayaya. Waxaad la hadli kartaa oo kaliya wax nin, oo uu ku xidhay inay ku kajamaan mowduuca iyo aad Gabagabeyn Doonaa kor u qosol halkii iyagoo ka xumaaday, oo ku saabsan.
English: Woody Allen in riwaayad ee New York City. (credit Photo: Wikipedia)
Woody Allen ayaa this in la yidhaahdo:
1. “Lacagta waa ka wanaagsan tahay saboolnimada, haddii oo kaliya sababo dhaqaale.” Waxay arrintu u muuqataa wanaag ii, Waxaan ula jeedaa qaabka wax walba uusan ku lug lacag, laakiin waxa aanu u leeyihiin in aan la qaadan gacan iyo lug ah si aad u hesho.
2. “Waxaan aaminsanahay in ay jiraan wax halkaas naga daawashada. Nasiib darro, waa dawladda.” 'Nuff yiri.
3. “Waxaa jira waxyaabo ka xun nolosha dhimashada ka. Weligaa ma ku qaatay fiidkii la iibiye caymiska?” Tani waxay dhacdaa in ay noqon mid ka mid ah kuwa classic. Waxaan ula jeedaa arrintan ku saabsan dhibaatooyinka yar nolosha ee ma aha oo dhan xun, ilaa uu’ muujinaysaa ilaa.
Sure, xiriirka heli kartaa adag, ama uusan haysan dhibaatooyin ay u badan tahay in wax kasta oo ku saabsan qoraaga xiriirka waxay ku xidhan tahay in ay ugu dhaqsaha badan la ogaado. Waxaan la raaco waxa ay doonayaan, wadnaha our, aad ka hadlaysaan qalbigiisa ku sida wadnaha ka mooyaane in dhiigga usoo tuuro jidhkaaga oo dhan.
4. “Jacaylku waa jawaabta, laakiin inta aad sugayso jawaabta, galmo kiciyo qaar ka mid ah su'aalaha quruxsan xiiso leh.” Oo haddii aad rabto in dheeraad ah, kaliya on weydiinaya!
5. “Eraygii A dhakhso ah oo ku saabsan ka hortagga uurka ee afka laga qaato. gabar ayaan idiin yeedhay inaan sariirta i raacaan, ayay tiri 'maya'.” Waxay arrintu u muuqataa, 'Wax ku ool ah ", Waxaan qabaa.
Oo marka ay timaado nolol maalmeedka, uu run ahaantii waa ogyahay sida loo sameeyo sida ugu fiican ee soo baxay marxalada kasta oo suurto gal ah, iyo ma waxa aanu ku lug dacwad haddii uu ku dhacaa neerfaha.
6. “Asal ahaan xaaskeyga ahaa qaan. Waxaan noqon lahaa guriga qubeyska oo waxay ku iman lahaa oo u tiimban doomo aan.” Weligay lahaa doon in aan qubeyska ka hor. Just taag waxa at halka barareyso biyo kulul ii cudur badeed hore u dhigaysa.
7. “Anigu ma cabsan dhimashada, Waxaan kaliya ma doonayaan in ay halkaas ku noqon markay dhacaan.” Haddii uu roobku da'o, waxaa daayaa.
8. “Anigu waxaan ahay shukriya qosol, marka laga reebo caano soo baxa sanka iga.” Waxaa ka heli karto ka xun marka aad fuuqsata on beerÖ ama dawo luqluqasho, oo waxaa hal mar igu dhacay!
9. “Haddii aad rabto in aad ka dhigi Ilaah qosli, isaga u sheegi ku saabsan qorshayaashaada.” Ugu yaraan uusan na dhufan hillaac, iyo Aad ayaan ugu mahadcelinayaa, waayo,.
Inkastoo waxa laga yaabaa in ay dhacaan oo dhan oo naga mid ah in toban xiga, iyo labaatan, ama xataa soddon sannadood, Waxaan u maleynayaa in aan dhan u leeyihiin inay arkaan in nooc ka mid ah oo kala duwan oo iftiinka iyo ma ahan oo keliya aragtida. Anigu ma u ekaan kartaa in la qiyaaso nolosha aan gabal kasta oo xigmad na hanuuniyo yaabaa. Haddii aan nahay diinta ama ma, waxa ay qaadataa geesinimo dheeraad ah si ay u aqbalaan cabsi aad oo ay bartaan sida ay wax uga qabtaan waa in dhammaan arrimaha marka ay timaado xitaa qaadan teedsan.
Oo soo koobo waxyaabaha, halkan waa nugget la soo dhaafay ee xigmadda ah si ay u tagaan si kastaba ha ahaatee BYO, mar kasta oo ay, oo meel kasta oo aan laga yaabaa in.
10. “talent ee isagoo faraxsan waxaa mahadiyay iyo jeelahay waxa aad leedahay, halkii waxa aadan haysan.”
22073	0 ABC (Golden sheeg-A-SHEEKADII Book), Aliveness (fanka legdinta), Annie Hall, qosol, Woody Allen
← Scan ayaa faahfaahsan ee Pluto [VIDEO] injineerada daaweynta kansarka Pioneering nidaamka difaaca jirka si ay ula dagaalamaan cudurka →